Kune vanhu vanowana kufamba pane kwavo pachavo kwakaoma, kufamba scooter kuri kuwedzera mukuzivikanwa. Seimwe nzira kune mawiricheya iwo akanaka kune vanhu vasinganyatsoda imwe, asi ivo havagone kufamba vega. Kuwedzera Kuzvimiririra Iwo ma scooter anotendera vakwegura nevakaremara kuti vatungamire mararamiro akazvimirira uye vave […]
Kune vanhu vanoona kufamba pane kwavo kwakaoma, kufamba Scooter vari kuwedzera mukuzivikanwa. Sezvimwe nzira kune mavhiripu akakosha kuvanhu vasinganyatsoda imwe, asi ivo havagone kuzvifambira vega.
Scooter anotendera vakweguru uye remara kutungamira mararamiro akazvimirira uye kushingairira kunze. Vanogona kuzviitira vega mabasa vasina kutsamira pane vamwe vanhu kuti vabatsirwe. Aya ma scooter anogona nyore kufamba nenzira dzisina kuenzana uye anoteedzera zviri nyore. Nedhivha yavo yakasimba yekutendeuka ivo vanofambika zviri nyore.
Kana iwe uine kufamba matambudziko, sikuta iyi ichakubatsira iwe kubuda uye nekugara uchishanda. Hauchafanirwi kupotsa pane zviitiko zvekunze.
Nyore uye Yakachengeteka Kushandisa
Zvinenge chero munhu anogona kushandisa magetsi emagetsi sikuta. Kuti ushandise imwe iwe haufanire kunge uine rezinesi uye ivo vakadzikama kwazvo nekuda kwenzvimbo yavo yakadzika kwazvo yegiravhiti. Kunyangwe iwe uchikwira nemukwidza wakadzika kana pamusoro penzvimbo dzakaomarara, aya ma scooter anonetsa kukanda pamusoro. Vanogona kufamba nekukurumidza kunge mamaira masere paawa. Kuvadzora, vane mabhureki makuru emagetsi uye emagetsi.
Inonyaradza uye Inononoka
Izvo zvakanaka chaizvo kufamba scooter vane zvigaro zvinogadziriswa, nenzira iyo iwe unogona kuve wakasununguka mukati mazvo kunyangwe ugere mavari kwenguva yakareba. Vazhinji Scooter vane rakakura rakakura dengu kumberi iro rakakodzera kutakura grocery kana zvimwe zvinhu. Sezvo sikuta iine simba bhatiri, zvese mushandisi anofanirwa kuita kugara uye kufamba munzira yavo.
Iwo ma lithiamu mabhatiri pane emagetsi sikuta ane huwandu hwemakumi maviri kusvika makumi matatu emamirioni pamutero uzere. Kuti udzorezve zvese zvaunofanirwa kuita kuzvivharira mukati kana zvisiri kushandiswa.
Neimwe yeaya scooter iwe unenge wakazvimiririra uye haufanire kuvimba nevamwe vanhu nekuda kufamba. Iwe unogona kugadzira yako yega purogiramu uye haufanire kuvimba kana vamwe vanhu varipo. Iye zvino haufanire kuvimba nevatariri kuti vakutore pakuenda kunze.